Nechinotsiva CentOS. Dzimwe nzira kuva uye kwete kufunga. | Linux Vakapindwa muropa
Kubva svondo rapfuura hova dzeingi yemagetsi dzakayerera pamusoro sarudzo Sarudzo yaRed Hat yekumira kutsigira yechinyakare edition yeCOSOS mukufarira iyo Rolling Kuburitsa modhi yakavakirwa paFedora.
Kutaura chokwadi, ndinofunga kutsamwa kwakamutswa munharaunda hakuna kurongeka. CentOS yaive nemashandisirwo maviri ekutanga:
-Iyo yaive hwaro hweanodhura ekutambira zvirongwa. Aya marudzi ehurongwa ari kutsakatika nekuda kwemhinduro kunoenderana nekupihwa kweakafanogadzwa-akajairwa mashandisiro ekushandisa mamaneja akadai seWordPress kana chaiyo kushandisa senge OSCommerce.
-Kuvandudza uye kuyedza mafomu ayo anozoiswa pamakomputa anomhanya Red Hat. Iyo Red Hat Kambani inopa marezinesi ekuvandudza emahara Ivo vanopa mukana wekuparadzira uye zvimwe zvishandiso zvekugadzira uye kugadzirisa kunyorera. Mune Red Hat chirevo, zvakataurwa kuti chiyero chemarezinesi aya chichawedzerwa.
Zvisinei, ngationgororei dzimwe nzira dziripo
1 Chii chekutsiva CentOS ne
Chii chekutsiva CentOS ne
Ini ndinotanga nekuita kujekeswa. Iri harisi runyorwa rwakakwana. Ndiri kuyedza kusadzokorora mazita akaonekwa mune mamwe zvinyorwa, kana, chero zvakadaro, kusadzokorora nharo. Izvo zviripo kusiira nemaune. Oracle Linux. Panzvimbo pekuchengeta nherera dzeCentOS iyi kambani inofanirwa kuchengeta nherera dzeOpenSolaris
CentOS bazi 9 uye Red Hat Enterprise Linux ichave yakavakirwa paFedora 34 iyo ichave iripo gore rinouya. Wadii kuenda wakananga kunobva?
Ehezve, makomputa anoshandiswa muhurumende nemasangano ezvokutengeserana anoda kugadzikana uye yakaratidza software. Nekudaro, CentOS neRHEL hazvisi zvechizvino neshanduro dze software yavari mukati. Zvisinei, Kuedza kugoverwa kuburikidza nenharaunda yeFedora usati waiburitsa kunofanirwa kukwana muzviitiko zvakawanda.
Chinhu che Fedora Server modularity. Mune mamwe mazwi, iwe unogona kuve neshanduro dzinoverengeka dzesoftware imwe chete musingatapurirane kana nekushandura masisitimu ehurongwa.
Ngatitii semuenzaniso kuti iwe unoda kuyedza kuti WordPress inoshanda sei neiyo ichangoburwa PHP 8, asi iwe haugone kukwanisa kuti webhusaiti yako iende kunze kwenyika. Unogona kuve neshanduro mbiri dzePHP dzinomhanya dzakafanana.
Seva inogona kutarisirwa uye kuongororwa neCockpit graphical interface iyo inobvumidza kwete chete kuona uye kuongorora mashandiro uye chimiro chehurongwa, asi zvakare kuendesa nekutarisira masevhisi-based services.
Iyo yakavhurika sosi dura controller FreeIPA inotaurira epamberi chitarisiko manejimendi, DNS, zvitupa masevhisi, uye Windows ™ dhatabhesi yekubatanidza kune nharaunda
Nenzira Ubuntu iri CentOS Linux uye Red Hat Enterprise Linux pane imwechete distro. Ehe, inoshandisa yakasarudzika yekupakata system uye zvinoreva kuti yakakura basa rekutama pane kumirira RockyOS kuti ibude, iyo CentOS forogo, kana kushandisa RHEL yekuvandudza rezinesi.
Zvandiri kureva ndezvekuti iyo Kushandiswa kwekuparadzanisa kwacho kusununguka, kunyangwe chirongwa chakachipa kwazvo chekutsigira chekutengeserana chakabatanidzwa pane icho cheRed Hat kambani.
Ubuntu Server inopa maturusi ekushandisa midziyo, kugadzirisa gore masevhisi, uye kugadzira chaiwo michina. Iyo ine shanduro dzekutsigira dzakawedzerwa kwemakore mashanu dzinoburitswa makore maviri ega ega.
Iko kushandiswa kweSpap mapakeji kunokutendera iwe kuti ushandise zvinoshandiswa zvakachengeteka uye wozvigadziridza pasina kugadzirisa iyo yasara sisitimu.
Arch Linux haisi pane chero runyorwa. Muchokwadi, haina kugoverwa kwemaseva pachawo, asi iwe unofanirwa kuigadzirisa mukuisirwa. Asi, ini ndine shamwari dzinomhanya ese maficha mukati megore neichi kugovera uye ivo vanofara. Arch Linux iri kugovera kweRollig Kuburitsa, zvinoreva kuti inogadziridzwa zvachose. Iyo ine zvakakwana zvinyorwa uye yakawanda nzvimbo yezvinyorwa ine yakazara kwazvo kuunganidzwa kwekushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chii chekutsiva CentOS ne. Dzimwe nzira kuva uye kwete kufunga.
Unoburitsa chinyorwa musi wa28 uye zvirinani chingangove chisina kukurumidza.
Ini handina kukwanisa kupokana zvakanyanya nenharo uye dzimwe nzira dzakatsanangurwa muchinyorwa chino. Izvo ndezvekuva nechimwe chinhu chemahara neyakavanzika-giredhi mhando, asi iwe hauzive chero chinhu nezvazvo.
Isa Arch uye usaise Debian ... zvirinani kuti zvinoshamisa kuti ndezve maseva uye kugadzikana kunofanira kukunda ...
Iri harisi runyorwa rwakakwana. Ndiri kuyedza kusadzokorora mazita akaonekwa mune mamwe zvinyorwa, kana, chero zvakadaro, kusadzokorora nharo.
Debian iri pane ese runyorwa pawebhu
Ndiri naCamilo. Rondedzero yezvikonzero zvekuve neCentOS inopfuura kukwana, kutaura zvazviri inofuratira mazhinji emakambani anoshandisa CentOS. Kutanga kubva pane ino isina kugadzikana nzira, hazvichakukodzera kuverenga zvimwe zvese zvinyorwa.
Usazvitore nenzira isiri iyo ... ini ndinowanzo kuuya kune peji rako asi iyo ndima inoshanda kune chero chinhu ... ini handizive zvinoonekwa mune mamwe zvinyorwa kana ndikauya pano ... zvakare ... ubuntu uye fedora zvioneke mune "mamwe" mazita (ikozvino zvandakaenda kunomutsvaga)… pasina mhirizhonga.
Usanetseke. Kana vanhu vakabvumirana neni pane zvese zvaizofinha.
Ini ndinoramba ndichitsvaga kuvhuraSUSE pane irwo runyorwa. Seye RPM-based distro zvinoita kunge imwe yesarudzo dzinonzwisisika kwandiri. Zvisinei, SELinux kutsigira ndechimwe chezvinhu zvandinosuwa zvakanyanya.
Fedora isarudzo yakanaka, asi kana iwe ukabvisa CentOS kwete chikamu cheRukova inova inotevera diki vhezheni yeRHEL (zvakakomba, handifunge kuti idambudziko) uye iwe unoisa Fedora ndeyekuti iwe unoda kugara pamucheto.